घट्यो बैंकहरूको नाफा, कसले कति कमाए? :: कमल नेपाल :: Setopati
घट्यो बैंकहरूको नाफा, कसले कति कमाए?
गत वर्षको तुलनामा यसपालि बैंकहरूको नाफा घटेको छ। यो आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा १७ वाणिज्य बैंकहरूको नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा खस्किएको छ। दस वटा बैंकको भने नाफा बढेको देखिन्छ। मर्ज गरेर यो वर्ष संयुक्त कारोबारको विवरण देखाइँदा केही बैंकको नाफा बढेको हो।
कोरोना प्रभावले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउँदा नाफामा कमी आएको उनले स्पष्ट पारे।
'कोरोनाकै कारण ऋणमा प्रोभिजन बढ्यो। अर्कोतर्फ बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहिरहँदा सस्तो ब्याजमा ऋण दिन प्रतिस्पर्धा भएर असर देखियो,' दाहालले सेतोपाटीसँग भने।
त्यस्तै लगानीयोग्य रकम थन्किँदा बैंकको लागत बढ्न गएर नाफामा असर परेको दाहाल बताउँछन्। थन्किएको रकममा निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिइरहनुपर्छ, तर त्यसबाट ब्याज आम्दानी हुँदैन।
बैंकहरूलाई सिसिडी रेसियोमा ८५ प्रतिशतको सीमा छ। तर औसतमा ७४ प्रतिशत मात्रै कायम हुनुले लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको पुष्टि गर्छ।
बैंकहरूको स्प्रेड दर घट्दै जाँदा नाफामा असर परेको बताउँछन् राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइओ किरणकुमार श्रेष्ठ।
'राष्ट्र बैंकले नै स्प्रेड दरको अधिकतम सीमा घटाउँदै लगेको छ,' श्रेष्ठले भने। यस्तो दर सबै वाणिज्य बैंकले ४.४ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
हाल रकम थन्किँदा बैंकहरूले आधार दरमा ०.५ प्रतिशतभन्दा कम प्रिमियम दर तोकेर ऋण दिइरहेको श्रेष्ठले बताए, 'रकम थन्किँदा प्रतिस्पर्धा हुन गयो। आधार दरमै ऋण दिनुपर्ने अवस्था छ। अनि नाफा त घट्ने नै भयो।'
त्यस्तै मेगा, प्राइम कमर्सियल, एनएमबी र कुमारीको नाफा मर्ज/एक्वीजिसनकै कारण उच्चदरले बढेको देखिन्छ।
गत वर्ष ६ महिनामै १६ बैंक 'अर्ब क्लब' मा थिए। अहिले १३ वटा बैंक परेका छन्।
एभरेष्ट, हिमालयन, एसबिआई, सिद्धार्थ र स्टान्डर्ड चार्टडजस्ता बलिया बैंक 'अर्ब क्लब'बाट बाहिरिएका छन् भने मेगा र कुमारी समाहित भएका छन्।
हेरौं, ६ महिनामा कुन बैंकको नाफा कति?
नाफा, पुस २०७७
नाफा, पुस २०७६
१ अर्ब ७४ करोड ८८ लाख
२ अर्ब २० करोड ९ लाख
२ अर्ब १ करोड ६० लाख
२ अर्ब ४ करोड १८ लाख
२ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख
१ अर्ब ६८ करोड ५९ लाख
१ अर्ब ३२ करोड १६ लाख
१ अर्ब ५८ करोड १७ लाख
२ अर्ब ६ करोड ५ लाख
२ अर्ब १ करोड ६२ लाख
९६ करोड १९ लाख
१ अर्ब ५० करोड ९८ लाख
१ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख
१ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख
१ अर्ब ८१ करोड ३३ लाख
१ अर्ब ३० करोड ७ लाख
१ अर्ब ६१ करोड ३९ लाख
१ अर्ब ९ करोड २७ लाख
६५ करोड ३२ लाख
१ अर्ब ७४ करोड २४ लाख
५१ करोड ४८ लाख
१ अर्ब ७ लाख
१ अर्ब ३५ करोड ४ लाख
१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख
१ अर्ब ५१ करोड ८६ लाख
१ अर्ब ८ करोड ५७ लाख
९१ करोड ८७ लाख
१ अर्ब २ करोड ६५ लाख
१ अर्ब ६ करोड २७ लाख
१ अर्ब १४ करोड ७४ लाख
८० करोड २७ लाख
८२ करोड १८ लाख
७२ करोड ७६ लाख
१ अर्ब २२ करोड ६९ लाख
७० करोड ८५ लाख
८८ करोड ३८ लाख
९४ करोड ९४ लाख
९४ करोड ४३ लाख
१ अर्ब ३० करोड ४४ लाख
९५ करोड २ लाख
८० करोड ७१ लाख
९० करोड ३० लाख
९४ करोड १२ लाख
८० करोड ७७ लाख
८७ करोड ५१ लाख
६८ करोड ७७ लाख
१ अर्ब २१ करोड ६५ लाख
८० करोड ३० लाख
६१ करोड ४० लाख
७५ करोड ६३ लाख
४६ करोड ६५ लाख
६५ करोड २ लाख
२० करोड २८ लाख
३१ करोड ६२ लाख
स्रोतः बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमसिक वित्तीय विवरण।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १५, २०७७, २०:२२:३४